प्रकाशित : पौष २७, २०७४ | १६५ पटक हेरिएकोसमाचार
आज भोलि दाह्री पाल्नु फेशन नै बनेको छ । अझै पनि दाह्री पाल्नु कतिपयको दृष्टिकोणमा नराम्रो मानिन्छ । दाह्री पाल्नु फेशनको रुपमा मात्र नभई यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो एकदम फाइदाजनक मानिएको छ । धेरैलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ । दाह्री पाल्नुको केहि फाइदा यस प्रकार रहेका छन् । १) दाह्री पाल्नाले सूर्यको अल्ट्राभोयलेट किरणबाट करिव १५ प्रतिशतसम्म बच्न सकिन्छ । जसबाट छालाको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । २) दाह्री पाल्नाले छालालाई ब्याक्टेरियल संक्रमणबाट बचाउछ भने डन्डीफोर र दाग-धब्बा जस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । ३) दाह्रीले छालामा एलर्जी उत्पन्न गर्ने कण वा प्रदुषित तत्वलाई रोक्ने भएकोले दाह्री पालेर यसलाई दिनहुँ सफा गरे विभिन्न खाले एलर्जीबाट बच्न सकिन्छ । ४) दाह्री राख्ने पुरुषको व्यक्तित्वले विपरित सेक्सलाई निकै आकर्षित गर्ने र इभोल्यूशन एण्ड...Read More
प्रकाशित : पौष २५, २०७४ | २२२ पटक हेरिएकोसमाचार
काठमाडौं । श्रीमतीको इच्छापिवपरीत यौनसम्पर्क राखेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । प्युठान भर भई ललितपुरको कार्यबिनायक बस्ने ३० वर्षका बाबुराम उपाध्यायलाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई इच्छाविपरीत वैवाहिक करणी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी पुष्पचन्द्र रञ्जितका अनुसार गत ३ चैतमा उपाध्यायलाई पक्राउ गरिएको हो । श्रीमती रीता रिजालको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनीबीच एक वर्ष अघिमात्र विवाह भएको थियो । उजुरी दिने रिजालले आफ्नो नाम गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएपछि प्रहरीले उनीहरुको घटना बाहिर ल्याएको हो । पक्राउ परेका बाबुरामले भने सहमतिमै सम्बन्ध राखिएको बताएका छन् । मुलुकी...Read More
प्रकाशित : पौष २५, २०७४ | १९२ पटक हेरिएकोसमाचार
बढाउने केहि प्राकृतिक तत्व हरु मेरा हजुरबाले निकैपछि मेरा बालाई जन्माए । त्यो बेलामा वृद्धवृद्धाले वृद्धावस्थामा सन्तान जन्माउनु वा जन्माउनका लागि हरिवंश पुराण लगाउनु सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले त्यो कथाकहानीमा सीमित हुँदैछ । हाम्रो पुस्ताले यौन शक्तिलाई पछिसम्म कायम राख्न के गर्न सकिन्छ ? हरिश , कुरिनटार श्रीस्वस्थानीको कथामा शिव ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीको प्रसंग आउँछ र त्यसमा ७० वर्षका वृद्धले सन्तान जन्माएको पढ्न पाइन्छ । यो कथा मात्र होइन । हामीले अपनाउने जीवनशैलीले हाम्रो यौन जीवन र यौनशक्ति निहित हुन्छ । वेदमा कतिपय यस्ता चिजको उल्लेख छ, तिनको नियमित सेवनले हाम्रो यौनशक्ति कायम हुन्छ भनी बताइएको छ । पुरुषहरुका...Read More
प्रकाशित : पौष २५, २०७४ | २६८ पटक हेरिएकोसमाचार
काठमाडौं । यौन शब्दको हाम्रो समाजमा खुलेर प्रयोग नगरिएपनि सम्पर्क राख्ने कुरामा अगाडि छन् । हाम्रो समाज मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न समाजमा पुरुषले युवती भन्दा परस्त्रीसँग सम्भोग गर्न मनपराउँछन् । यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो । तर, परस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । कुनै कुनै परस्त्री यस्ता हुन्छन् । जसलाई देख्नेवित्तिकै पुरुषको उत्तेजना १८० डिग्रीसम्म पुग्छ । परस्त्रीसँग आकर्षित हुने कारणहरु यसप्रकार छन् :जहिले पनि यौवनपूर्ण अवस्थालाई महिलाको आकर्षणसँग जोडिन्छ । पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश तथा कसिलो शरीर भएका महिलालाई आकर्षक मानिन्छ । त्यसैगरी विकसित स्तन पनि महिलाको शारीरिक आकर्षणको मापदण्डमा पर्छ...Read More
प्रकाशित : पौष २४, २०७४ | २०२ पटक हेरिएकोसमाचार
दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई यस्तो खतरा
एजेन्सी । दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा ९डप्रेसन०को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन विश्वविद्यालयलले हालै गरेको एक अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लागेको जनाएको थियो । सुत्ने समयावधि र मानसिक अवस्था बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कम सुत्नेमा बढी मानसिक समस्या र चिन्ता देखिएको सो अध्ययनमा पत्ता लागेको हो । विश्वविद्यालयले अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बढी सुत्ने मानिसमा भन्दा कम सुत्ने मानिसमा बढी नकारात्मक सोचाई पाइएको पनि उल्लेख गरेको छ । आठ घण्टा भन्दा कम सुत्ने मानिसहरुमा चिन्ता, कुन्ठा, तनाव र निराशा धेरै आउने गरेको सो विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित मेडिकल...Read More
प्रकाशित : पौष २३, २०७४ | १७१ पटक हेरिएकोसमाचार
राधा खनाल-‘हेर न माथि घर फलानोकी बुहारीको लबाइ, जहिले पनि प्यान्ट र टी-सर्ट लगाएर हिँडेकी हुन्छे । आफ्नै ससुरा-जेठाजूका घर नजिकै छन्, कस्तो, लाज-शरम कत्ति पनि नभाकी !’, छिमेकी र आफन्त मेरै कानमा पुगोस् भने झैं गरी यस्ता कुरा गर्छन् । मसँग भने उनीहरूतर्पm फर्केर दिने हाँसोको जवाफबाहेक अरू केही हुँदैन । त्यसो त म पश्चिमकी बुहारी, त्यसै पनि कतिपय चालचलन, रहनसहन र संस्कार मिलेको हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि म मेरो हिसाब-किताबमा कतै चुकेकी छु भन्ने लाग्दैनथ्यो। आफ्नो पेसा पनि पत्रकारिता, जहिले पनि हतारमा कुद्नुपर्ने अनि आफूलाई जे पहिरन सहज लाग्यो त्यही लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भन्दैमा हामी महिलालाई...Read More
प्रकाशित : पौष २०, २०७४ | १६० पटक हेरिएकोसमाचार
पारम्परिक र सांस्कृतिक हिसाबले सुपारी नेपाली समाजको अभिन्न अंग हो । पाहुनालाई सगुनको रूपमा सुपारी दिएर सम्मान गरिन्छ भने निम्तो गर्न सुपारी चाहिन्छ भन्ने चलन अद्यापि छँदैंछ । पुजाआजामा त सुपारी नभैहुँदैन । तर, यही सुपारी हानिकारक र रोग लगाउने अम्मल पनि हो । अचेल यसको व्यवसायिकता र प्रयोग दिनदिदैं बढ्दै गएको छ । त्यसो हुनुमा यसको अम्मल लगाउने बैगुन मुख्य कारण हो । स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुपारी तथा सुपारीजन्य पदार्थको सेवनबाट उत्पन्न हुने मुखका समस्यामा दा“त खिईने, स–साना चिरामार्फत् रसभित्र पसेर दातको रंग परिवर्तन हुने, दाग बस्ने, टुक्रा परी भा“ँचिने र खस्रो हुने, खोकी लाग्ने, मुख खोल्न कठीन हुने,...Read More
प्रकाशित : पौष १९, २०७४ | २०८ पटक हेरिएकोसमाचार
महिलाको शरिरसँग जोडिएका यस्ता तथ्य, जुन पुरुषलाई थाहा छैन्
१. महिलाको प्रजनन क्षमता पुरुषको भन्दा कम हुन्छ । उनीहरु ४५–५० वर्षसम्म मात्रै आमा बन्न सक्छन् । २. महिलाको कलेजो, पेट, थाइराइड ग्रन्थी र मृगौलाको आकार पुरुषभन्दा ठूलो हुन्छन् । मुटु र फोक्सो भने साना हुन्छन् । ३. महिलाको स्तनको आकार अर्कोभन्दा अलि ठूलो हुन्छ । यो दायाँ वा बायाँ जुनसुकै पनि हुनसक्छ । ४. महिलाको शरिरमा भएको हर्मोन कार्डियो प्रोटेक्टिभ हुन्छ जसले उनीहरुलाई हृदयघातको समस्याबाट बचाउँछ । ५. महिलाको शरिरमा पुरुषको भन्दा धेरै बोसो हुन्छ । यो स्तन, नितम्ब, जाँघ र पेटमा धेरै जम्मा हुने गर्दछन् । ६. महिलाको हड्डी पुरुषको तुलनामा हल्का हुन्छ । त्यसको बनावट पनि तुलनात्मक रुपमा...Read More
प्रकाशित : पौष १९, २०७४ | २३४ पटक हेरिएकोसमाचार
एक्लै हुनुहुन्छ हार्टअट्याक भयो ! तपाई संग १० सेकेण्ड समय हुन्छ यसो गरे तपाई बच्नुहुन्छ ! जानकारीका लागी सेयर गरौ ! हार्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । हार्टअट्याकले धनी वा गरिव भन्दैन । यो रोगले उमेर पनि भन्दैन । सानो तथा ठूलो जोसुकैलाई आक्रमण गर्न सक्छ । हार्टअट्याक यो समय र यति बजे आउँदै छुँ भनेर भनि हाल्ने बेथा पनि होइन । तर हार्टअट्याक हुनासाथ के गर्ने भन्ने उपायका बारेमा जानकारी भएको खण्डमा यो बेथालाई सजिलै जित्न सकिन्छ । हार्टअट्याक पूर्व जानकारी अर्थात घोषणा गरेर आउने रोग होइन । र हार्टअटयाकले आक्रमण गर्यो कि मानिसहरुले यसबाट बच्न अनेक...Read More
प्रकाशित : पौष १९, २०७४ | २४२ पटक हेरिएकोसमाचार
बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? यस्तो रहेछ कारण
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ ।विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ। पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ। साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ। के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूप मा परिवर्तन आउँछ त? यो कुरा यहाँ भनिनेछ । एक सर्वेले यसको बारेमा पत्ता लगायको छ। एक अध्यनका अनुसार महिलाहरूमा आउने परिवर्तनको कारण खुल्न आएको छ...Read More